Qaramada Midoobay oo Taageero Dheeri ah u Balan-Qaadday Somaliya – Radio Daljir
Qaramada Midoobay oo Taageero Dheeri ah u Balan-Qaadday Somaliya
Seteembar 29, 2015 5:33 b 0
Talaado, September 29, 2015 (Daljir) —Shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya islamarkaana ay si wadajir ah u shir guddoominayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa lagu soo gebagebeeyay magaalada News York ee dalka Mareykanka.
Kulanka waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka socotay waddamada taageera Soomaaliya, iyadoo looga hadlayay horumarrada dowladda Federaalka Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, dhismaha maamullada, isku dhafka ciidamada, howlgallada ka dhanka ah argagixisada, iyo hiigsiga 2016-ka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madasha ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlay xaaladda dalka ka jirta, horumarrada dowladda, qorshayaasha dowladda ee la xiriira hiigsiga 2016-ka, dib u eegista dastuurka, iyo ahmiyadda ay leedahhay isku dhafka ciidamada si looga maarmo ciidamada nabad ilaalinta.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Bank Ki Moon ayaa sheegay in beesha caalamku ay dhinac taagantahay dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna soo jeediyay in la dar dargeliya dib u eegista dastuurka iyo guddiyada doorashada ka hor inta an la gaarin 2016-ka.
Dhinaca kale R/wasaaraha dalka Britain David Cameron oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in uu ciidamo u soo dirayo Soomaaliya kuwaasoo dhinaca tababarrada iyo qibradda ka gacan siiya ciidamada nabad ililaalinta AMISOM iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkan ka hor magaalada New York uga qeybgalay shirweynaha golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay oo sanadkiiba mar la qabto.